MM Battery Info for Android
MM Battery Info
Rated 4.89/5 (18) — Free Android application by Myanmar Font App Publisher
About MM Battery Info
ဘက်ထရီဟား ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်အရမ်းအရေးပါ ပါတာအားလုံးအသိဖြစ်မှာပါ။
မိမိတို့ဖုန်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနေတဲ့ ဘက်ထရီရဲ့အချက်အလက်ကိုမြန်မာလိုစစ်ဆေးနိုင်ဖို့ MM Battery Info နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဖုန်းမှာအသုံးပြုထားတဲ့ Battery ကဘာနည်းပညာအမျိုးအစားနဲ့ထုတ်လုပ်ထားလဲ ?
ဘက်ထရီရဲ့အပူချိန် နဲ့ အခြားဗို့အား၊အခြေနေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေနေတွေအားလုံးကြည့်ရူ့နိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Download and install MM Battery Info version 1.0 on your Android device!
Android package: com.htetznaing.batteryinfo, download MM Battery Info.apk
What are users saying about MM Battery Info
Nice Built ☺
Battery Info — SeableAppsFree App
Battery Info — sharksoft androidFree App
Battery Info — CHU NGUYEN PHONGFree App
Funny Battery Info — ডিজিটাল বাংলাদেশFree App
Battery Info — Manuel PetrónFree App